Miady mafy mba tsy mafy ady lava… | NewsMada
Tena mafy ny ady amin’izao? Tsy inona fa ny fiatrehana ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ihany. Izay aloha ny tsy maintsy imasoana ao anatin’izao fahamehana ara-pahasalamana izao: zava-dehibe, maika. Tsy mitsaha-mitombo hatrany, ohatra, ny isan’ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina Coronavirus, indrindra ho an’ny faritra Analamanga manokana.
Nefa efa mila hahahenika an’i Madagasikara ny valanaretina, afa-tsy faritra azo isaina amin’ny rantsan-tanana anila sisa. Tena mafy ny ady amin’izany, na mila amafisina. Tsy mitsitsy ny fahavalo, mamono… Na izany aza, tsy misy atao mahakivy na mandreraka na mampihemotra. Miady mafy fa tsy hoe mafy ady na sahirana tsinona manoloana ny aretina, raha ny fantatra.
Voalaza mandrakariva, ohatra, fa ampy ny fitaovana sy ny fanafody, mitombo ny toeram-pandraisana ny marary, afa-mandray marary ny tobim-pitsaboana eny ifotony… Tsy mafy ady na sahirana amin’ny fiatrehana ny valanaretina amin’izay lafiny izay? Nefa mirongatra ihany ny tsimokaretina. Izay no mila fahamalinana, fahamatorana, firaisankina, fifampitokisana, fitoniana, faharetana…
Mila miady mafy amin’izany rehetra izany. Nefa amin’ny maso tsy miangatra: na miady mafy aza, misy ny mafy ady na sahirana. Tsy misy tsy sahirana amin’izao? Mikiky tsikelikely ny aretin’ny tsy fisiana eny ifotony, mihalalina, mihanaka… Tsy lavina, misy ny karazana fanampiana sy fanomezana, saingy mbola mila miady mafy na amafisina hatrany ny atao amin’izany.
Mila fanefitra sy fanafana? Tsy mitsaha-mitombo, ohatra, ny tsy fandriampahalemana eny ifotony, ny fimenomenonana, ny fahasorenana, ny te hitroatra aza. Hanao ahoana? Na eo aza ny hoe ny hamisavisana ny ratsy hiavian’ny soa, misy ny ratsy tsy visavisaina intsony fa efa iainana. Mila fahamalinana, fahamatorana, firaisankina, fifampitokisana, fitoniana, faharetana…?